စီးပွားရေးသတင်းတို Archives | Page 22 of 30 | Frontier Myanmar
ရန်ကုန်-ခတ္တမန္ဒူ တိုက်ရိုက်လေကြောင်းခရီးစဉ် စတင်တော့မည်
ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ နီပေါနှင့် တရုတ်တို့ ဖက်စပ်တည်ထောင်ထားသည့် Himalaya Airlines က ရန်ကုန်နှင့် ခတ္တမန္ဒူမြို့အကြား တိုက်ရိုက် ခရီးစဉ်များကို ယခုလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် စတင်ပြေးဆွဲတော့မည်ဖြစ်သည်။ နီပေါနိုင်ငံ၏ မြို့တော်နှင့် ရန်ကုန်မြို့အကြား ဆက်သွယ်ပေးမည့် အဆိုပါ ခရီးစဉ်များကို တစ်ပတ်လျှင်နှစ်ကြိမ် ပြေးဆွဲသွားမည်ဟု လေကြောင်းလိုင်း၏.
ရန်ကုန် ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်မှ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်သို့ ဆက်သွယ်သည် ကားလမ်းကို တည်ဆောက်ရန်အတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၂၈ သန်း ချေးငှားရန် မြန်မာနိုင်ငံ၏ တောင်းဆိုချက်အတွက် ထိုင်းနိုင်ငံက စဉ်းစားနေသည်ဟု ဘန်ကောက်သတင်းစာတစ်စောင်တွင် ပြီးခဲ့သည့် ရက်သတ္တပတ်က ရေးသားထားသည်။ ယခုလအစောပိုင်းက ကျင်းပခဲ့သည့် အထူးစီးပွားရေးဇုန် စီမံခန့်ခွဲရေး ပူးတွဲကော်မတီအစည်းအဝေးတွင် ထိုကဲ့သို့ တောင်းဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု.
ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေကြောင်းလိုင်းကြီးဖြစ်သည့် Emirates က ရန်ကုန်နှင့် ဖနွမ်ပင်ကြား တိုက်ရိုက်လေကြောင်းခရီးစဉ် ပြေးဆွဲမှုများ စတင်တော့မည်ဟု ကြေညာလိုက်သည်။ ၎င်းတို့၏ ဒူဘိုင်းမှ ပြေးဆွဲနေသည့် လမ်းကြောင်းတွင် အပြောင်းအလဲ ပြုလုပ်လိုက်ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။ လေကြောင်းလိုင်း၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ ဇူလိုင် ၁ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ ဒူဘိုင်းမှ ရန်ကုန်သို့.
မန္တလေးဘီယာကို ဂျပန် Kirin က ဝယ်ယူရန် ပြင်ဆင်နေ
ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ဂျပန်ဘီယာချက်လုပ်ငန်းဖြစ်သည့် Kirin က မြန်မာနိုင်ငံမှ Mandalay Brewery အား အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းကဏန်းပေးကာ ဝယ်ယူတော့မည်ဖြစ်သည်။ အာရှနှင့် သမုဒ္ဒရာဒေသတွင် ဈေးကွက်ရရှိမှု ပိုမိုအားကောင်းလာစေရန် ချဲ့ထွင်နေသည့် Kirin ၏ နောက်ဆုံး လုပ်ဆောင်ချက်လည်း ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရှေးအကျဆုံးသော မန္တလေးဘီယာချက်လုပ်ငန်းကို လွှဲပြောင်း ရယူသွားရန်အတွက်.